musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Maitiro ekuita neakaoma Vatengi?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Zvizhinji zvepasirese zvinosangana nemhando dzose dzemabhanan'ana kana kunonoka zvine chekuita nemamiriro ekunze. Izvi zvinoguma nevashanyi vakatsamwa uye kudiwa kwekugadzirisazve marudzi ese ehurongwa hwekufamba.
Chii chinoita kuti vatengi vagumbuke?
Kumusoro kwenyika yekuchamhembe, mwedzi waNyamavhuvhu unowanzodaidzwa kunzi "imbwa mazuva ”ezhizha. Iri zita rinobva mukuti kazhinji kacho kunopisa zvekuti kana imbwa inoda kutenderera mumigwagwa.
Kuguma kwezhizha pachinyakare kwave zvakare kwakakwira mwaka wevashanyi munzvimbo zhinji dzenyika. Iyo indasitiri yekushanya iri kutarisira kuti mushure mekuderera kukuru kwehupfumi kwegore rapfuura iyo 2021 ichave nguva yekugadzirisa.
Kana mishonga yekudzivirira ikashanda ipapo 2021 inogona kunge iri nguva apo ndege nemahotera azere, uye tsinga dzevashanyi dzinowanzo vhunduka. Uyu ndiwo mwedzi apo zvinhu, kazhinji zvinopfuura simba revashanyi, zvinowanzoita kunge zvinokanganisa.
Nyamavhuvhu mwedzi wakanaka wekutarisa izvo zvinoita kuti vatengi vedu vagumbuke, maitiro ekudzora kutsamwa, uye maitiro ekuchengetedza kutonga pazviitiko zvisingawanzo kudzora, senge kunonoka kune chekuita nemamiriro ekunze. Nemwaka wekushanya uri mune yakakwira giya, tora iwo mukana kuyedza hunyanzvi hwako mukushandura mamiriro akaoma kuita kubudirira uye kudzidza kudzikisira kutsamwa uye kuwedzera chigadzirwa uye kugutsikana kwevatengi. Kuti ikubatsire kurarama panguva yakaoma iyi mukushanya, funga zvinotevera:
Rangarira kuti, munyika yezvekushanya, panogara paine mukana wekupokana uye kusagutsikana kwevatengi.
Zvisinei nezvaunoita, pachagara paine avo vanoda zvimwe kana vasingafarire zvaunoita. Vashanyi vari kubhadhara mari yakawanda yezororo ravo uye vanoda kunzwa vachidzora, kunyangwe mumamiriro ezvinhu apo pasina munhu ane chero kutonga. Gadzira zviitiko umo mutengi ane imwe pfungwa yekutonga kunyangwe iri shoma sei. Semuenzaniso, panzvimbo pekungotaura kuti chimwe chinhu hachigone kuitwa / kuzadzikiswa, edza kutaura mhinduro seimwe inogona kuita.
Paunenge uchipa idzi dzimwe nzira, ita shuwa kuti vemberi-vashandi vashandi vanogara vakangwarira uye vachiratidza shiviriro. Kazhinji, dambudziko rekushanya rinogona kubviswa kwete nekugadzirisa dambudziko rese, asi nekutendera mutengi kuti anzwe kuti akunda kanenge kakunda kadiki.
-Ziva zvako zvepamutemo, zvepamoyo uye zvehunyanzvi zvausingakwanise.
Kune zvikonzero zvakawanda zvekuti vanhu vanofamba, zvimwe zvekunakidzwa, zvimwe zvebhizinesi, uye zvimwe zvehukama hwemagariro. Kune avo vari muchikwata chekupedzisira, zvakakosha kuti nyanzvi dzezvekushanya dzinzwisise simba re '' kumira kwevanhu ''. Ava vanhu vane tsika yekusada kunzwa zvikonzero.
Vanokurumidza kutsamwa uye vanononoka kuregerera. Mukubata navo, ziva zvinokushatirisa uye kana iwe wasvika pamiganhu yako. Iva neuchenjeri zvakakwana kuti uone kana dambudziko riri kutanga uye kuti rubatsiro ruchazodiwa.
-Iva nesimba rako pachako.
Tourism ndiyo indasitiri inopokana nepfungwa yedu yekuzvikoshesa. Veruzhinji vanogona kuve vari vaviri vanoraira uye dzimwe nguva zvisina kunaka. Kazhinji, zviitiko zvinoitika izvo zvisiri nyore kubva mukutonga kwedu. Iyo iri panguva iyi iyo izvo zvakakosha kudzora kwako kwemukati kutya uye manzwiro.
Kana mazwi ako akataura zano rimwe uye mutauro wemuviri wako uchitaura imwe, unobva warasikirwa nekuvimbika.
-Tourism inoda yakawanda-mativi vanofunga.
Tourism inodaidzira kuti isu tidzidze maitiro ekugadzirisa zvinoverengeka zvisina hukama nezvinodiwa panguva imwe chete. Izvo zvakakosha kuti vashandi vekushanya vazvidzidzise ivo mune hunyanzvi hwekushandisa ruzivo, manejimendi manejimendi, uye hunhu kubata.
Munguva dzakaoma nguva, vepamberi vanhu vanofanirwa kukwanisa kudzora hunyanzvi hwese hutatu panguva imwe chete.
-Kubudirira nzvimbo dzekushanya dzinounza izvo zvinovimbisa.
Tourism inowanzo shungurudzwa nekuwedzeredzwa-kushambadzira uye zvipikirwa zvezvakawanda kupfuura zvainogona kuunza. Usambofa watengesa chigadzirwa icho chako nharaunda / chinokwezva chisingape.
Chigadzirwa chisingagumi chekushanya chinotanga nekutengesa kwechokwadi.
-Vakabudirira vatungamiriri vekushanya vanoziva nguva yekubvunza hunhu hwavo. Masikirwo anogona kazhinji kuva rubatsiro rwakanyanya, kunyanya munguva dzekutambudzika.
Zvichienderana chete nehunhu, zvisinei, zvinogona kutungamira kune dambudziko. Sanganisa ruzivo rwepamoyo nedata rakaomarara. Zvino usati waita sarudzo, ronga zvese seti yedhata mune zvine mutsindo fashoni.
Hunhu hwedu hunogona kupa idzo dzisingawanzo nguva dzekupenya, asi mune dzakawanda zviitiko shandisa kusekesa sarudzo dzako pane data rakaomarara uye nekutsvagisa kwakanaka.
-Kubudirira mabhizinesi ekushanya anoshanda kugadzirisa mamiriro akaoma pane kuatonga.
Nyanzvi dzezvekushanya dzakagara dzichiona kusangana kunowanzo kurasa-kurasikirwa mamiriro. Kubudirira chaiko kunouya mukuziva nzira yekudzivirira kupokana. Munguva yenguva dzekutsamwa, gadzirira kufunga netsoka dzako.
Imwe nzira yekudzidza hunyanzvi hwekufunga netsoka dzako ndeyokukudziridza zviitiko zvekupokana uye kudzidziswa kwavo. Izvo zvakadzidziswa zvirinani kushanya kwedu uye vashandi vemberi vari, zvirinani ivo vanove mukugadzirisa dambudziko nekuita sarudzo dzakanaka.
-Iva unoziva yenzvimbo inogara ichichinja uye nekuziva kutsvaga mikana kubva panguva dzakaoma kana dzisina kugadzikana.
Kana iwe ukazviwana iwe uri mukukonana, ita shuwa kuti iwe unoibata pasina kupwanya ego yemutengi wako. Denha wako anorwisa nenzira inobvumidza mutengi agumbuka kuti aone chikanganiso chake asingarasikirwe nechiso.
Rangarira kuti dambudziko rinoumbwa nenjodzi nemukana. Tsvaga iwo mukana mune yega yega bhizinesi dambudziko.
-Try Kugadzira akatsamwa mutengi chikamu chechikwata chako.
Paunenge uchiedza kuhwina mutengi akashatirwa, ita shuwa yekuramba uchiona zvakanaka uye kuva netariro mune ese mazwi aunoshandisa uye matauriro ekutaura akashandiswa.
Rega mutengi ataure kutanga uye ataure chete mushure mekunge nzvimbo yekuvhenekera yapera, uchibvumira mutengi kubuda, zvisinei nekuti mazwi ake angave asina kunaka sei, inzira yakanaka yekuratidza kuti unomuremekedza kunyange ukasabvumirana.
Kufamba kune njodzi zvakadii? Bvunza Dr. Peter Tarlow! yeSaferTourism:
Dr. Peter Tarlow ndiye Co-Muvambi we World Tourism Network.
Kuti uwane rumwe ruzivo uye nhengo enda ku www.wtn.travel
Dr. Tarlow anotungamira zvakare Safer Tourism, shamwari ye TravelNews Boka uye kubvunza femu. Zvimwe pane www.safertourism.com
Gunyana 20, 2021 pa 13: 37